Isipiliyoni sokuhlola Isilawuli Sokuqondisa se-PS4 ku- # FarpointVR Challenge | Izindaba zamagajethi
Isipiliyoni sokuhlola Isilawuli Sokuqondisa se-PS4 ku- # FarpointVR Challenge
NgoLwesine olwedlule, ngoMeyi 25, umcimbi # DesafíoFarpointVR uqale, lapho iPlatyStation ifuna ukwazisa ngezimfanelo zalesi sibhamu ngokoqobo nenkampani ehamba phambili, inkampani enhle kakhulu esisho ukuthi uma sifuna ukukhuluma nge-Aim Controller, idivaysi entsha izinzwa ezinyakazayo futhi ezilingisa isikhali u-Sony afuna ukwenza ngaso ulwazi lwethu ku-Virtual Reality sicwilise ngangokunokwenzeka. Ukuze, Ngibe nenhlanhla yokuhlola uhlelo olusha ngeFarpoint, futhi ngifuna ukukutshela ngalolu lwazi lokuqala nge-Virtual Reality ku-PlayStation 4 ephelezelwa izesekeli ze-avant-garde kakhulu emakethe.
Ekufikeni kwethu, iqembu "losomkhathi" lisamukele kulokho okwakungeke kube umbukiso olula, kwase kuyisikhathi sokuthi singene ngokuphelele endimeni kasomkhathi ohambela iplanethi engaziwa ngenhloso yokutakula ozakwabo noma okuncane thola impilo yomfokazi, ngakho-ke kunjalo. E-Desafío Farpoint VR, eseduze kwesiteshi sezinganekwane i-Atocha Station eMadrid, sikwazile ukuzwa ngokujulile isipiliyoni ku-Virtual Reality, indlela ehlukile yokubona nokuzwa imidlalo yevidiyo, njengoba mhlawumbe besingakaze siyicabange, futhi ngikholwe, akumangazi ukuthi umakadebona womdlalo wevidiyo onjengami akulula neze.
1 Sazi izikhali ezinhlanu kuFarpoint VR ngokujulile
2 Ukuthintana kokuqala ne-Aim Controller
3 Imiphumela yegeyimu ye-Aim Controller
4 Isipiliyoni sokudlala i-Farpoint VR
Sazi izikhali ezinhlanu kuFarpoint VR ngokujulile
Basinikeza ngamunye ngamunye izinhlobo zezikhali esasingazithokozela kamuva kuFarpoint VR, uma imodeli isivele isimanga, engangingalindelanga ukuthi kungamangala lapho ngikujabulela kwidijithali. Kulezi zikhali ezinhlanu, sithola izinto ezimbili ezingafani nezinye nezintathu zokwenziwa kwabantu:
Isibhamu sokuhlasela: Yisikhali esisebenza ngezindlela eziningi kunazo zonke, nezinhlamvu ezingapheli, yebo, kufanele sibheke ichopho lesikhali kahle, ngoba lapho lishisa liyayeka ukudubula. Ngendlela efanayo, inesiqalisi se-grenade esizosebenza ngokucindezela enye yezinkinobho ku-Aim Controller futhi engeke isize izinto. Ngokwami, iyona engibhekane nayo cishe yonke iFarpoint VR Challenge futhi ibinethezekile futhi isebenza kahle, inamehlo abomvu asisekelo futhi iphumelele impela kusukela enqulwini.
Isibhamu: Isibhamu esidala, esisebenza ebangeni eliseduze, eliyingozi ngokumelene nezitha eziningi, futhi mhlawumbe indlela engcono yokuhlula abaqamekeli. Ngeshwa isibhamu asinazo izinhlamvu ezingenamkhawulo futhi sikushiya uthengise ngokuphelele ebangeni elide neliphakathi.
Isibhamu se-sniper: Futhi isibhamu sokunemba sakudala, esinenhlamvu eyodwa. Inembobo engenamandla kakhulu kepha iyasisiza nebhentshi, ngoba ikhombisa ngokusobala ukuthi sizoshaya nini isibhamu. Ukuyihlola, kungabonakala kungasebenzi kahle kunalokho eyikho, kepha ubukhulu bayo nokunemba kuyamangaza impela.
Isibhamu Esilukhuni: Isibhamu semvelo ehlukile, sidubula ama-spikes afakwe ugesi. Ngaphezu kwalokho, singakhetha ukuthi ama-spikes akhishwe ngokuqhuma kwezinto ezintathu okulimaza kakhulu. Futhi bekungasebenzi kahle ngokweqile ekusebenziseni emdlalweni, yize kumangalisa.
Isibhamu se-Plasma: Futhi iyindalo emvelweni, ine-cadence ephansi kepha iyabulala ngokuphelele, isihluku kunazo zonke izikhali, kuphela kochwepheshe.
Ukuthintana kokuqala ne-Aim Controller
Idizayini ibonakala ikude kakhulu esingayithola kusuka kusibhamu sangempela. Ephuzwini sithola ukukhanya okufanayo njengokujwayelekile kumasistimu wokuthola ukunyakaza we-Sony PlayStation. Yakhiwe ngopulasitiki ofana ncamashi ne-Dual Shock 4 20th Anniversary, amathoni ampunga anethezeka nge-PlayStation yethu. Kukhanya ngokweqile, njengoba kungalindelwa kumkhiqizo onalezi zici.
Lapho isitokisi besizotholakala khona, sizoba nenhlanganisela yezinkinobho zakudala ezingakwesokudla: Unxantathu, isikwele, indingilizi no-X, ezungeze owokuqala wenjabulo. Lapha AbakwaSony bebeqinisile bengasebenzisi into efanayo nokwakheka njengaku-joystick yesilawuli se-Dual Shock 4, uzokwazisa ukusetshenziswa nokuphikiswa kwayo.
I-trigger yokudubula itholakala endaweni ejwayelekile futhi efanele yalolu hlobo lomkhiqizo, i-trigger ephelele, hhayi ngokuma kwe-hook, ngeke kube nephutha lapho ucindezela (umphumela wenkinobho) futhi izokwazi ukumelana kakhulu. Ngenkathi siphambili sizoba nenye iJoystick nezimbangela ezimbili zeL1 neR1 ezizoba nemisebenzi eyehlukene enikezwe, njenge, isibonelo, ku-Assault Rifle ukwethula amabhomu esiwaqoqa endleleni. Impela, i-Aim Controller ibe yimpumelelo yangempelaYize ukwakheka kwayo kwangempela kungamangazi, akumele sikhohlwe ukuthi yakhelwe ukudlala kuReal Virtual.
Imiphumela yegeyimu ye-Aim Controller
Ukumangala kokuqala, lapho nje ubeka izibuko zakho ubona isibhamu sikhonjisiwe, futhi sihamba. Awukwazi ukukusiza futhi uhlongoza ukuguqula isikhali ukuze usibone kuzo zonke izinhlangothi ... Ingabe kungenzeka? Yebo kunjalo, i-Aim Controller inembile impela, wethusa kakhulu. Ukwabelana ngemibono nabanye ababekhona, safika esiphethweni sokuthi cishe okuhlaba umxhwele ukwedlula umdlalo, bekukwazi ukuyeka, ukuhambisa isikhali nokusiqapha kuzo zonke izinhlangothi njengokungathi ubuphethe ezandleni zakho, akunakwenzeka kangcono.
Ngokuqondene nesibhamu, ukuze usebenzise i-peephole kufanele ufunde ngokushesha ukuthi indlela yokusebenza ihilela ukuyiphakamisa nokuyibeka eduze kwehlombe, awudingi ukucwayiza noma ukuyisondeza ku-VR, umzuzu wamahlaya ntambama. Cishe okumangazayo njengokushintsha kwesikhali, phakamisa ithiphu ubheke ehlombe lakho futhi ubuke ushintsha phakathi kwesikhali onaso. Ukudutshulwa okhalweni kunembile njengoba ungalindela, uthola isikhali ngemizuzwana embalwa nje, kangangoba ukusebenzisa i- "peephole" kulahlekelwa umqondo phakathi nobunzima bempi. Kunconywe ngokuphelele, kuyamangalisa ngokwethembeka.
Isipiliyoni sokudlala i-Farpoint VR
Umdlalo thina uzokhumbula masinyane okudala, iHalf Life, lokho ebesingakunikeza ngaleso sikhathi ukuze sikwazi ukudlala iHalf Life kulezi zimo. Kepha ake siqale ngokubi, sigcine ngokuhle. Ngokusobala iFarpoint iswele indawo enhle, ubheka emhosheni unethemba lokuthola okuthile ngokujula, kepha akukho okunye okuqhubekayo kusuka eqinisweni, kepha-ke, kufanele sibe nobulungisa futhi sixwayise ukuthi lokhu okuqukethwe ku-Virtual Reality kusha kakhulu, ngaphezu kwalokho, lapho isenzo awunaso isikhathi sokubheka leyo mininingwane.
Umdlalo uyesabeka, mkhulu futhi uwuthanda wonke ngasikhathi sinye. Umdlalo yi-classic «kusuka kokuncane kuye kokuningi»Uzokwazi ukuthuthuka kancane kancane, kepha ungazethembi, sidlale i- «Descent», izinga lesibili, nokubekezela kwami ​​kwaqala ukuncipha cishe imizuzu engama-45 yokudlala, lapho abaphathi ababili bengishaya yonke indawo. Kuyacaca ukuthi sibhekene no umdlalo ojwayelekile, ukuvezwa isikhathi eside kungakhathaza kakhulu kunesidingo. Mayelana nesiyezi esesikhulume ngenhla se-Virtual Reality, kufanele ngiveze ukuthi yize bengicabanga ukuthi ngizolahlekelwa ibhalansi yami kwesinye isikhathi (ngokusobala), angikaze ngibone nokuncane ukusikisela kwesicanucanu, isiyezi noma ukukhathala ngokweqile, mhlawumbe ngoba besiba nesikhathi esimnandi.
Isisindo sezibuko, ukungezwani, i-Aim Controller kanye nama-headphone akwa-Sony 7.1 mhlawumbe kwenza ukudlala isikhathi eside kungabi lula njengoba kubonakala, nokho, kungokuhlangenwe nakho okunconywe kakhulu, futhi ngokungangabazeki okuthande bonke labo abakhona ngathola injabulo yokuhlangana lapho. AbakwaSony bakwazile ukukhuthaza i-Virtual Reality, beyiletha kubo bonke abasebenzisi bayo, hhayi kuphela kulabo abanemali eningi ezikhwameni zabo. Iphakethe le-Aim Controller elineFarpoint VR Kubiza i- € 79,90 KULOKHU KUXHUMANA kusuka e-Amazon, futhi nakanjani kufanele uthenge uma une-PlayStation VR. Sizoqhubeka nokuhlola ubuchwepheshe ukukulethela zonke izindaba, silinde ukujabulela iGran Turismo Sport VR.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Isipiliyoni sokuhlola Isilawuli Sokuqondisa se-PS4 ku- # FarpointVR Challenge
I-Cellularline Antenna ... iphindwe kabili ukumbozwa kwe-iPhone yakho? Abazithobayo [BUYEKEZA]
IHuawei yethula amatheminali ebangeni eliphakathi noHuawei Nova 2 noNova 2 Plus